IGarmin VivoActive 3, imifanekiso yokuqala yoku 'kunxiba' iyavela | Iindaba zeGajethi
IGarmin VivoActive 3, imifanekiso yokuqala yoku 'kunxiba' iyavela
URuben inyongo | | SmartWatch
UGarmin yenye yeenkampani ezibheja kakhulu kwiimveliso Yam kugxilwe kuqheliso lwezemidlalo. Kwimigca yemveliso sinokufumana iiwotshi ezintle kunye neentsimbi ezijolise kukwenza igalufa, ukuqubha, ukuhamba ngebhayisikile kwaye, ewe, ukuziqhelanisa negalufa. ukubaleka.
Ngokunjalo, sifumanise ukuba kukho iintsapho ezahlukeneyo zeemveliso kwaye namhlanje sizakugxila kwiVivoActive, izacholo okanye iiwotshi ezineGPS ezilinganisela ukubetha kwentliziyo kwaye zinokwazi umgama ohanjiweyo ukuze kulawulwe ngcono iinzame ezenziwe. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi inkampani sele izokwazisa ilungu elitsha losapho kwaye ukubonakala kwayo kufana newotshi eqhelekileyo kunesongo. Le yiGarmin VivoActive 3 entsha.
Yam, i-portal eyayifumeneyo, isishiyele imifanekiso emininzi ukuba iza kujongeka kanjani. Kwaye njengoko sele sibonisile, eyona nto imangalisayo ngumgaqo woyilo omtsha le nkampani ikhethe olu phehlelelo.
Kuyinyani ukuba ayisiyiyo kuphela imveliso yeGarmin ejongeka njengewotshi eqhelekileyo. Kuya kufuneka ujonge kwifayile ye- Garmin Vivomove esisiseko sewotshi ebala amanyathelo akho. Nangona kunjalo, oku IGarmin VivoActive 3 yinto ethe kratya: ngakumbi kwicala le-smartwatch.
Ngokwemifanekiso evuzayo, ngasemva kwewotshi kuyakubakho inzwa yokulinganisa inqanaba lentliziyo. Kwakhona, kwiscreen sayo-ubungakanani bayo abaziwa okwangoku-ayizukubonisa lonke ulwazi malunga nomsebenzi wethu, kodwa Izakubamba zonke izaziso ezingenayo. Oko kukuthi, zombini i-imeyile, iinethiwekhi zentlalo, kunye neenkonzo zemiyalezo ekhawulezileyo ezinje ngeWhatsApp. Ke ngoko, kungaphezulu kokuqinisekileyo ukuba iya ngaphezulu kumgca we-Apple Watch okanye i-Samsung Gear S3, kunaleyo yokujonga ezemidlalo ngokulula. Ewe uya kuyidinga iselfowuni kuzo zonke iimeko. Ngoku, ngalo mzuzu kokubini umhla wokumiliselwa kunye nexabiso lazo alaziwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » SmartWatch » IGarmin VivoActive 3, imifanekiso yokuqala yoku 'kunxiba' iyavela